Kanzuru yeMutare Yotemeswa Musoro neNyaya yaMutevedzeri waMeya
Kanzuru yeMutare yapindwa napongwe nepamusana pekusawirirana kuti yoita sei nenyaya yekudzorerwa kwaVaAdmire Mkorera semutevedzeri wameya weguta iri pachigaro.
Vamwe vemakanzura aya vari kupokana nekuti vamkorera vadzorerwe pachigaro chavo vamwe vachiti vakasadzorerwa pachigaro zvichapa kuti makanzura ose adzingwe negurukota rezvekutongwa kwematunhu VaIgnatius Chombo.
Pamusangano wakaitwa nemakanzura aya nemusi weChina svondo rapera makanzura akatatsurana pachavo maererano nenyaya yaVaMkorera iyo yapa kuti mukanzuru muve nemapoka maviri vamwe vari kuvatsigira nevari kupokana nekudzorerwa kwavo pachigaro chemutevedzeri wameya weguta.
Mudare rekanzuru rakagarwa svondo rapera kanzura weWard 9 VaChrispen Dube vakaudza vamwe vavo kuti ivo vachiri kuda kuramba vari kanzura saka nyaya yavamkorera inofanirwa kugadziriswa nekukasira sezviri kudiwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu, VaChombo.
VaChombo vakanyorera kanzuru yemutare matsamba maviri vachiti kanzuru iyi idzorere vamkorera pabasa asi kanzuru iyi iri kutsika madziro. VaDube vakayambira vamwe vavo kuti zvaisabatsira kuda kupikisa zviri mumutemo wekutongwa kwemaguta sezvo zvaizopa VaChombo masimba ekudzinga makanzura ose asiri kuda kutevedza zviri mumutemo.
Asi chimwe chikamu chemakanzura chiri kupikisa izvi chinoti nyaya yavamukorera iri kuonekwa nezvayo kuhofisi yaVaTsvangirai saka hapana chinofanirwa kuitwa kudzimara pava nemashoko abva kuhofisi yemutungamiriri webato iri. Pakamiswa VaMkorera basa pakaiswa kanzura itai masaka kuti vasanobata basa semutevedzeri wameya.
Kanzura George Jerrison vakati VaChombo vainge vakasununguka kuita madiro avo asi ivo sekanzuru vaida kupa mukana kuna vatsvangirai kuti vavape gwara maererano nenyaya iyi. VaMkorera vakamiswa kuva mutevedzeri wameya gore rapera nevamwe vavo vemukanzuru iyi, izere makanzura emdc inotungamirirwa naVaTsvangirai vachipomerwa mhosva yekunzi vakaba zvekudya parufu rwaami Susan Tsvangirai.
Asi nyaya iyi haina kuiswa mumaoko emapurisa. VaChombo vakanyorera kanzuru iyi vachiti kuita kwayo kwaive kutyora mutemo wezvekutongwa kwemaguta, uye mhosva yavaipomerwa yaive isinei nekutadza kwavo kuita basa muguta remutare.
Meya weguta reMutare VaBrian Leslie James vakati vari kutarisira kunzwa kubva kunhume sere dzichaenda kuhofisi kwaVaTsvangirai svondo rino kuti dzinouya nemashoko okuti voita nezvenyaya iyi sekanzuru.
Asi VaDube vakanyunyuta zvikuru nezvenyaya yaVaMkorera vachiti kunze kwekutyira kudzingwa kwemakanzura naVaChombo, kanzuru yakatarisana nechikwereti chekubhadhara magweta aVaMkorera ayo akaisa nyaya iyi kudare repamusoro reHigh court iro rakatonga richiti vamkorera vadzoswe pabasa. VaDube vakati kanzuru inoda kuti ibvise madhora churu chimwe namazana mashanu semuripo wemagweta aVaMkorera.